Xog shaqsiyeed oo rakaab ah ayaa lagu xaday weerarka amniga internetka ee Bangkok Airways
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Xog shaqsiyeed oo rakaab ah ayaa lagu xaday weerarka amniga internetka ee Bangkok Airways
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Baaritaankii ugu horreeyay ee dhacdada ayaa u muuqday inuu xaqiijinayo in qaar ka mid ah xogta shaqsiga laga yaabo in la helay kuwaas oo ah, magaca rakaabka, magaca qoyska, dhalashada, jinsiga, lambarka taleefanka, emaylka, cinwaanka, macluumaadka xiriirka, macluumaadka baasaboorka, macluumaadka safarka taariikheed, qayb ahaan macluumaadka kaarka deynta, iyo macluumaadka cuntada gaarka ah.
Bangkok Airways Public Company Limited waxay dhibane u ahayd weerar xagga amniga internetka ah.
Weerarka ayaa sababay in la helo oggolaansho iyo sharci -darro helitaanka nidaamka macluumaadka ee diyaaradda.
Dhacdadan ayaa lagu wargeliyay booliiska Royal Thai iyo sidoo kale ogeysiis la siinayo mas'uuliyiinta ay quseyso.
Bishii Ogosto 23, 2021, Bangkok Airways Public Company Limited waxay ogaatay in shirkaddu ay dhibane u ahayd weerar xagga amniga internetka taas oo keentay marin -u -helitaan aan la oggolayn oo sharci -darro ah.
Markii la helay sidaan oo kale, Bangkok Airways isla markiiba waxay qaadday tallaabo ay ku baarayso oo ay ku jirto dhacdada, iyada oo gacan ka helaysa kooxda badbaadada internetka. Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay baareysaa, si deg -deg ah, si loo xaqiijiyo xogta waxyeellada leh iyo rakaabka ay saameysay iyo sidoo kale qaadista tallaabooyin habboon si loo xoojiyo nidaamkeeda IT -ga.
Baaritaan bilow ah oo ku saabsan dhacdo waxay u muuqatay inay xaqiijinayso in qaar ka mid ah xogta shaqsiyeed laga yaabo in la helay kuwaas oo ah, magaca rakaabka, magaca qoyska, dhalashada, jinsiga, lambarka taleefanka, emaylka, cinwaanka, macluumaadka xiriirka, macluumaadka baasaboorka, macluumaadka safarka taariikheed, macluumaadka kaarka deynta qayb ahaan, iyo macluumaadka cuntada. Shirkadda si kastaba ha ahaatee, waxay xaqiijineysaa in dhacdadaasi aysan saameyn ku yeelanaynin hawlihii shirkadda ee hannaankii amniga.
Dhacdadan ayaa lagu wargaliyay booliska Royal Thai iyo sidoo kale ogeysiis la siinayo mas'uuliyiinta ay quseyso. Tallaabooyinka ka -hortagga asaasiga ah, shirkaddu waxay aad ugu talineysaa rakaabka inay la xiriiraan bangigooda ama bixiyaha kaarka deynta oo ay raacaan taladooda ayna beddelaan wixii furaha sirta ah sida ugu dhaqsaha badan.
Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay jeclaan lahayd inay uga digto rakaabka inay ka digtoonaadaan wicitaanno kasta oo laga shakiyo ama aan loo baahnayn iyo/ama emayl, maaddaama qofka wax weeraray uu sheegan karo inuu yahay Bangkok Airways oo isku dayo inuu xog shaqsiyeed ku ururiyo khiyaano (oo loo yaqaan 'phishing') ). Shirkadda (Bangkok Airways) lama xiriiri doonto macaamiil kasta oo weydiin doonta faahfaahinta kaarka deynta iyo codsiyada noocaas ah. Haddii ay dhacdo dhacdadan oo kale, rakaabku waa inay qaadaan tallaabooyin sharci ah.
W. Kami wuxuu leeyahay,
Ogosto 28, 2021 markay tahay 15:43
Digniinta Bangkokair ma runbaa mise waa been abuur lafteeda?
Waxaan la yaabanahay sababta oo ah sida caadiga ah waxay ku soo qoraan boostada magacayga - ma aha oo kaliya 'Macaamilka qaaliga ah'.
Intaa waxaa dheer labada lambarada Taleefoonka ee la bixiyay way ka duwan yihiin lambaradooda boggooda internetka ee hadda?